juillet 2018 - Page 2 sur 91 -
Horace Patrice (préfet-n’i Nosy-Be) : « Tsy tia korontana ny mponin’i Nosy-Be »
Mahakasika ny savorovoro politika amin’izao fotoana izao eto amin’ny firenena, dia nanambara ny préfet-n’ny Nosy-Be, Horace Patrice, fa tsy tia korontana ny mponina ao an-toerana. Noho izay indrindra, hoy izy tsy dia misy korontana, eny …Tohiny
Vadintany : Fanamby ny hametraka izany isaka ny distrika
Isan’ny olana mbola atrehin’ny vadintany sy ny mpanao lavanty misahana ny raharaha ara-pitsarana ny tsy fahampian’ny isa eto Madagasikara. Hatreto dia miisa 134 ny vadintany manerana ny Nosy. Mbola tsy mahasehaka ny firenena iray manontolo …Tohiny
Toamasina faha-2 : Hojeren’ny fanjakana ny fanamboaran-dalana 3000 metatra
Nandraisana fitarainana. Nampikolay ny mponina ny haratsian’ny lalana mampifandray ny kaomina Toamasina II amin’ny renivotr’i Betsimisaraka, Toamasina I. Hojeren’ny fitondram-panjakana ny fanamboarana io làlana mifery 3000m io. Efa tao anatin’ny taona maro no tsy nisy …Tohiny
Andry Rajoelina : Matahotra ny vahoakan’Antananarivo
Tsy sahy mikabary ankalamanjana intsony ny filohan’ny Mapar Andry Rajoelina raha vao Antananarivo no resaka. Ny nifanohitra tamin’izany hatrany anefa no nataon’ity mpanao politika ity nandritra ny fitetezam-paritra nataony efa ho iray volana mahery izao. …Tohiny